Ch 16 Mark – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Marka / Ch 16 Mark
16:2 And very early in the morning, tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nankany amin'ny fasana, the sun having now risen.
16:3 Ary hoy ireo olona hafa, “Who will roll back the stone for us, away from the entrance of the tomb?"
16:5 And upon entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, covered with a white robe, Dia talanjona.
16:6 Ary hoy Izy taminy:, “Do not become frightened. You are seeking Jesus of Nazareth, the Crucified One. He has risen. Tsy ato. Indro, the place where they laid him.
16:7 fa mandehana, tell his disciples and Peter that he is going before you into Galilee. Any no hahitanareo Azy, just as he told you.”
16:8 anefa izy ireo, mandeha mivoaka, fled from the tomb. For trembling and fear had overwhelmed them. And they said nothing to anyone. For they were afraid.
16:9 fa, nifoha maraina koa tamin'ny voalohan'andro Sabata, niseho voalohany tamin'i Maria Magdalena, avy izay efa namoahany demonia fito,.
16:10 Ary Maria nandeha ka nilaza azy io ho an'ireo izay efa nomba an'i Jesosy, raha mbola nisaona sy nitomany.
16:11 ary izy ireo, rehefa nandre aza fa velona Izy sady efa hitan-dravehivavy, tsy nino izany.
16:12 Fa rehefa afaka izany fisehoan-javatra, dia hita ao endriky hafa tamin'ny roa lahy aminy nandeha, raha mbola nivoaka ho any amin'ny ambanivohitra.
16:13 ary izy ireo, niverina, nilaza izany ho an'ny hafa; ary tsy nino azy ireo izy ireo.
16:14 Farany, dia niseho tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy, Jesosy, raha nipetraka nihinana. Ary Izy niteny mafy azy ireo noho ny tsy finoana sy ny hamafin'ny fony, satria tsy ninoany ireo efa nahita fa efa nitsangana indray.
16:15 Ary hoy Izy taminy:: "Mivoaha amin'izao tontolo izao ka mitoria ny Filazantsara amin'ny olombelona rehetra.
16:16 Na zovy na zovy no mino ka natao batisa no hovonjena. Na izany aza tena, na iza na iza no tsy nino dia hohelohina.
16:17 Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino. Amin 'ny anarako, izy no hamoaka demonia. Hiteny amin'ny fiteny vaovao.
16:18 Izy ireo handray menarana, ary, na dia misotro zava-mahafaty, dia tsy hanisy ratsy azy ireo. Ary hametraka ny tànany eo amin'ny marary, ka dia ho tsara. "
16:19 ary tokoa, ny Tompo Jesoa, rehefa niteny taminy, nakarina any an-danitra, ary mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra 'Andriamanitra.
16:20 Avy eo izy ireo, mametraka avy, nitory na aiza na aiza, miara-miasa amin 'ny Tompo ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana miaraka.